Hiezaka hanakaiky vahoaka ireo mpisolovava - ewa.mg
Hiezaka hanakaiky vahoaka ireo mpisolovava
News - Hiezaka hanakaiky vahoaka ireo mpisolovava
Notoloran’ny avy amin’ny
Frankofonia ordinatera maromaro, miaraka amin’ny kojakoja samihafa
ny holafitry ny mpisolovava, omaly tetsy Anosy. Haparitaka amin’ny
renivohi-paritany sy ho an’ny any Antsirabe ary Antsohihy ho
an’ireo mpisolovava, izany fitaovana izany. « Efa
hita amin’izany fitaovana izany ireo lalàna samihafa. Ny fanofanana
ho fanatsarana ny fahaiza-manaon’ireo mpisolovava ary mampita sy
mampahafantatra izany amin’ny vahoaka », hoy ny
filohan’ny holafitry ny mpisolovava, ny Me Razafinarivo Chantal.
Manampy izany ny fanofanana ireo mpampiofana ho an’ny mpikambana eo
anivon’ny filankevitry ny mpisolovava iarahana amin’ny Transparency
international. Miompana amin’ny fanjakana tsara tantana, ny ady
amin’ny kolikoly, ny momba ny etika izany ary
hampahafantarina ny vahoaka koa, araka ny nambarany hatrany.
« Natao hanatsarana ny fomba fiasa izany, manoloana ny
teknolojia amin’izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin’izany koa ny
teny filamatra : « Manampy anao ny mpisolovava –
Mampima ». Zon’ny rehetra tahaka ny fahazoana fahasalamana sy
ny fampianarana ny fandehanana eny amin’ny fitsarana. Eo koa ny
fitsarana manakaiky vahoaka », hoy ihany izy.
L’article Hiezaka hanakaiky vahoaka ireo mpisolovava a été récupéré chez Newsmada.
Nirifatra nandositra, vantany vao nahatazana ny polisy, ny lehilahy iray, 32 taona, teny amin’ny tetezan’i Behoririka, afak’ omaly maraina. Nifanenjehana izy ka voasambotra tsy lavitra teo. Fantatra teo fa saika nangalatra kodiarana fiara nipetraka teny amin’ny manodidina teny ity lehilahy ity. L’article Halatra kodiarana est apparu en premier sur AoRaha.
Tsy mbola tena am-perinasa ny “Cellule mixte d’enquête”
Manoloana ireo tranga fakàna an-keriny niseho teto an-drenivohitra tato anatin’ny andro vitsy izay dia fantatra, araka ny loharanom-baovao, fa samy manao famotorana ny eo anivon’ny Zandarimaria sy ny Pôlisim-pirenena. Momba ireo tranga teny Soavina tamin’ny faran’ny herinandro dia ny pôlisy misahana ny heloka bevava no avy hatrany nandray an-tanana ny raharaha. Vao andro vitsy izay dia olona enina no voasambotry ny zandarimaria eny Ankadilalana voarohirohy tamin’ny fakàna an-keriny maro teto an-drenivohitra ka natolotra ny Fampanoavana, omaly. Ny telo tamin’ireo olona voasambotry ny zandarimaria ireo dia naiditra am-ponja vonjimaika eny Tsiafahy raha nalefa eny Antanimora kosa ny roa hafa. Tsy mbola tena am-perinasa ilay “Cellule mixte d’enquête” na CME misahana manokana ny raharaha fakàna an-keriny, araka izany. Raha ny loharanom-baovao teny anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana kosa dia efa voatendry tamin’ny zoma 7 desambra lasa teo ny mpitsara iray natokana hisahana ny famotorana momba ny raharaha fakàna an-keriny. “Tsy hanao afa-tsy ny fakàna an-keriny io CME io. Ankoatra ilay mpitsara dia hisy zandary sy pôlisy ao anatiny”, hoy ity loharanom- baovao ity. Araka ny tsilian-tsofina dia ho eny amin’ny minisiteran’ ny Foloalindahy no hisy ny foiben- toeran’ny CME. Mba hahafahan’ireo mpanao famotorana mifantoka tsara amin’ny asa no fantatra fa antony hametrahana io birao io eny Ampahibe. Tsy hisy avy amin’ny tafika anefa ho mpikambana ao, araka ny loharanom-baovao. L’article Tsy mbola tena am-perinasa ny “Cellule mixte d’enquête” est apparu en premier sur AoRaha.